Vahaolana - AOOD Technology Limited
Ny teknolojia mifandraika AOOD mahazatra dia natao tamin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny tariby borosy manokana sy ny tarika conductive na ny boribory nitaingina zana-kazo. Izy io dia manana hery, fambara ary famindrana angona angon-drakitra, indrindra ny volamena amin'ny fifandraisana amin'ny volamena dia afaka miatrika signal malemy na fampitana data haingam-pandeha ary mitazona fahamendrehana avo lenta. Ny volafotsy amin'ny fifandraisana amin'ny volafotsy dia afaka manome ny ilain'ny tanjona ambany amin'ny fandefasana herinaratra azo itokisana.
Teknolojia tsy misy fifandraisana
Ao amin'ny scanner CT dia mila peratra slip miaraka amina biriky lehibe izy hiantohana ny famindrana ny taham-pahalalana avo lenta amin'ny fiasa haingam-pandeha. Ny injenieran'ny AOOD dia mamolavola teknolojia fampitana tsy mifandray amin'ireo rindranasa ireo. Ny peratra slip tsy mifandray dia manome hery mahery vaika na famindrana angona tsy misy fikojakojana sy fiainana fanompoana lava kokoa noho ny borosy mahazatra mifandray amin'ny peratra slip.
Rolling-peratra fifandraisana Technology
Ny teknolojia fantsom-panafody vaovao AOOD dia mandray kavina mifampikasoka hifandraisana mba hahatsapanao ny fahombiazan'ny famindrana peratra slip, izay mampiasa peratra varahina lohataona nopetahany volamena izay misy eo anelanelan'ny lalamby metaly sarobidy roa fa tsy ny fifandraisana ara-dalàna. Izy io dia manana fanoherana ambany kokoa, akanjo ambany, tabataba elektronika ambany, androm-piainana lava kokoa ary fahafaha-mamindra amin'izao fotoana izao. Izy io no vahaolana kavina lavorary mety ho an'ireo rafitra ireo mila habe lehibe, fahaiza-manao avo lenta ary peratra slipona lava. Ny peratra fifampikasohana amin'ny peratra AOOD dia manatanteraka ny asany tsara amin'ny fampiharana ara-pahasalamana, fiarovana, aerospace ary fitetezana.
Mercury misy ranoka
Ny peratra fihenan'ny mercury AOOD dia mampiasa farihy misy rakotra rakotra misy rano mifamatotra amina fifandraisana fa tsy fifandraisana borosy nentim-paharazana. Ny fitsipiky ny fifandraisana mampiavaka azy ireo dia manome antoka fa afaka mitazona fanoherana ambany sy fifandraisana maharitra izy ireo eo ambanin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, ary afaka mamindra hatramin'ny 10000A ankehitriny isaky ny tsatokazo. Ny ankamaroan'ny peratra slip mercury amin'izao fotoana izao AOOD dia ampiasaina amin'ny milina famafazana.
Ny fifindran'ny fibre optika dia teraka tamin'ny taha ambony indrindra amin'ny data. Ny teknolojia AOOD fibre optika dia afaka miantoka hatramin'ny tahan'ny angon-drakitra 10 Gbit / s na dia eo ambanin'ny tontolo iainana faran'izay mafy aza. Ny fantsom-pandrefesana rotary AOOD fibre optika dia namboarina niaraka tamin'ny vatan'ny vy tsy miova ary hatramin'ny fiarovana IP68, dia azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny karazana fampiharana avy amin'ny fitaovam-pitsaboana, ROV mankany amin'ny radara fanaraha-maso ataon'ny miaramila. Ny fifindran'ny fibre optika dia azo ampifandraisina amin'ny peratra fifampikasohana elektrika mifandraika amin'ny filan'ny peratra elektrika optika.
AOOD dia manolotra vahaolana avo lenta matetika eo anelanelan'ny sehatra voafaritra sy ny sehatra rotary, toy ny fakan-tsary amin'ny fahitalavitra, fiara tsy misy olona ary rafitra radara. AOOD dia mamela ny fampitana signal ao amin'ny elanelam-potoana manomboka amin'ny DC ka hatramin'ny 20GHz, ny fiarahan'ny rotary HF dia azo ampidirina ao anaty peratra elektrika ilaina araka izay ilaina.
Union Rotary Union
AOOD dia manolotra vahaolana fampitana haino aman-jery amin'ny alàlan'ny famindrana ny tsiranoka na gazy avy amina loharano miorina mankany amin'ny loharano mihodina ary mamela ny fivezivezena. Ny sendikan'ny rotary media dia ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany manomboka amin'ny latabatra fanondroana rotary ka hatramin'ny mandria fanodinana vy ka hatramin'ny fitaovan'ny ala hydraulic. Ny peratra slip, ny fibre optic rotary joint, ny HF rotary joint ary ny encoder dia azo ampidirina ao anaty rafitra rotary union. Na mila vahaolana manokana momba ny tsindry ambony ianao, ny hafainganam-pandeha avo lenta na ny volan'ny fivezivezena avo dia manohitra fotsiny an'i AOOD.